I-Monster kuphela inokuzibophezela lo lwaphulo-mthetho
U-Tiffany Cole, kunye nabamalungu abathathu be-co-defense, wabanjwa enecala lokuthunjwa nokubulawa kwangokuqala kwe-Florida couple, uCarol noReggie Sumner.
U-Tiffany Cole wayazi abaSommers. Babengumtshato obuthathaka obengabamelwane bawo eMzantsi Carolina. Kwakhona wathenga imoto kubo waza wawavakashela ekhaya labo eFlorida. Kwakuye kwenye yezo tyelelo ezazifumanisa ukuba zithengise ikhaya labo baseMzantsi Carolina zenza i-$ 99,000 inzuzo.
Ukususela kuloo ndawo, uCole, uMichael Jackson, uBruce Nixon, uJr., no-Alan Wade baqala ukuceba indlela yokuphanga eso sibini. Bayazi ukuba ukufikelela kwikhaya labo kwakuya kuba lula kuba iSommers beyazi kwaye bethemba uCole.
NgoJulayi 8, 2005, uCole, uJackson, uNixon, uJr., no-Alan Wade baya kwindlu yaseSummers ngenjongo yokuphanga nokubulala eso sibini.
Ngaphakathi kwindlu, abaSommers baboshwe ngeteksi xa u-Nixon, uWade, noJackson bekhangela ikhaya ngexabiso lexabiso. Baye banyanzelisa loo mbhangqwana kwigalaji yabo kunye nesiqu seLincoln Town Town Car
U-Nixon noWade baqhubela iLincoln Town Town Car, elandelwa nguCole noJackson ababehlala kwiMazda apho uColle wayeqeshisele uhambo. Baye bafika kwindawo ekhoyo ngaphesheya kwe-Florida line eGeorgia. Babesele bathabatha indawo kwaye bayilungisa ngokumba umkhosi omkhulu iintsuku ezimbini ngaphambili.
Xa befika uJackson noWade bahokela loo mbhangqwana emngxeni baza bawangcwaba bephila .
Ngesinye isikhathi, uJackson wayephoqelele isibini esitshoyo ukuba simxelele inombolo yabo yokuchonga ngekhadi labo le-ATM. Iqela laye lashiya iLincoln kwaye lafumana igumbi lehotele ukuba lihlale ebusuku.
Ngomso wabuyela ekhayeni lase-Summer, walitshitshisa kunye noClorox, beba zobuncwane kunye nekhompyutha apho uColle kamva waqhawula.
Kwiintsuku ezimbalwa ezalandelayo, iqela ligubha ubugebengu babo ngokuchitha iilidi eziliqela zeedola ezifunyanwa kwi-ATM akhawunti yehlobo.
NgoJulayi 10, 2005, intombi kaNksz yaseRain, uRhonda Alford, ibiza amagunya waza wachaza ukuba abazali bakhe belahlekile.
Abaphandi baya kwikhaya lase-Summer baza bafumana isitatimende sebhanki esabonisa imali enkulu kuyo. Ibhanki yaqhagamshelana kwaye yafunyanwa ukuba imali eyinqununu ikhutshwe kwi-akhawunti kule mihla embalwa edlulileyo.
Ngo-Julayi 12, uJackson noClele, ababiza njengeSommers, benza umnxeba kwiHhovisi likaSheriff lika-Jacksonville. Batsho i-detective eyaphendule kwikhwelo yokuba baye bashiya idolophana ngokukhawuleza ngenxa yentsapho yengxamiseko kwaye babe neengxaki zokufikelela kwiakhawunti yabo. Babenethemba lokuba unokunceda.
Ukugxininisa ukuba babengenabo ngokwenene, abaphenyi baqhagamshelana nebhankini baza bacela ukuba bangavali nayiphi na ihoxiswa kwi-akhawunti ukuze aqhubeke nophando lwakhe.
Wayesekwazi ukulandelela umnxeba weselula abafowunelwayo basebenzisa. KwakukwaMichael Jackson kunye neengxelo zibonisa ukuba ifowuni yayisetyenziswe kwikhaya lasehlobo ebudeni bokuba balala.
Kwakukho neefowuni ezininzi ezenziwe kwenkampani yokuqeshisa imoto eyayikwazi ukubonelela ngumphenyi ngokuchazwa kweMazda eyayiqeshwe nguColle kwaye ngoku yayidlulileyo. Ngokusebenzisa inkqubo yokulandelela ihlabathi emotweni, kwacaciswa ukuba i-Mazda yayiye kwiibhloko zekhaya lehlobo ebusuku abaye balahleka.
NgoJulayi 14, lonke iqela, ngaphandle kweClele, labanjelwa kwiHhotele eNtshona Koloni e-Charlestown, eSouth Carolina. Amapolisa aphinda amagosa amabini ehotele aqeshwe phantsi kwegama likaColle aze afumane impahla yakhe yabasebenzi. Bafumene nekhadi le-ATM yeSommers kwipokotshi yaseJackson.
UCole ubanjwe ekhayeni lakhe kufuphi neCharlestown emva kokuba iphoyisa lifike apha idilesi ngorhwebo lokuqashisa imoto apho yaqasha i-Mazda.
UBruce Nixon wayengummeli-mbambano wokuqala owavuma ukubulala abaSommers .
Wanikela amapolisa ngeenkcukacha zolwaphulo-mthetho olwenziweyo, indlela yokuphanga kunye nokuthathwa kwezinto ezicetywayo kunye nendawo apho loo mbhangqwana ingcwatyelwe khona.
UDkt. Anthony J. Clark, uMhloli wezeMpilo kwiGeorge Bureau of Uphando wenza i-autopsies kwi-Summers kwaye wafakazela ukuba bobabili bafa emva kokungcwatywa bephila kwaye iindinyana zabo zomoya zivaliwe ngothuli.
Cole Pleads Her Case
UColle wathatha ukuma ngexesha lokulingwa kwakhe. Wafaka ubungqina ukuba wayecinga ukuba ulwaphulo-mthetho luba busela obulula kunye nokuba akazange athathe inxaxheba ekuphanga, ukuxoshwa okanye ukubulala.
Kwakhona wathi ekuqaleni wayengazi ukuba iiSummers zahlala kwisiqu seLincoln yazo kwaye zathi zathathwa kwi-gravesite yangaphambili. Emva koko wathi imingxuma yacubungulwa ukuze kuthuswe abaSommer ukuba bayeke iinombolo zabo ze-PIN ze-ATM.
Ngomhla we-Oktobha 19, 2007, i-jury yaxoxela imizuzu engama-90 ngaphambi kokufumana uCole enetyala ezimbini zokubulala , ekubanjweni kokubambisana kunye neengcamango zokubulala, ezimbini zokubanjwa, kunye nokubala okubini.
UCola ugwetyelwe ukufa ngenxa yokubulala, ukuvalelwa entolongweni ngamnye ekuthunjweni, kunye neminyaka elineshumi elinesihlanu ngokuphanga. Okwangoku esecaleni lokufa e-Lowell Correctional Institution Annex
UWade noJackson baphinde bagwetyelwe baze bagwetyelwe izigwebo zokufa ezimbini. UNixon wavuma unecala lokubulala u-second-deg r ee waza wagwetywa iminyaka engama-45 entolongweni.
Iincwadi ezi-10 eziphezulu zezobuLwaphulo-mthetho ngee-Psychopathic Killers
I-Clemson Bikini Case Case
I-Mississippi Case Burning
Isicatshulwa soBume beComputer
Iintlobo zee-Waves Waves
I-Color Accents kunye neendlela ezidibeneyo - Izigqibo zomninikhaya
Uqwalaselo olusisiseko lweenguqulelo zeBhayibhile
I-Folsom Inkcubeko - Abazingeli bamandulo beBison beeNxweme zaseMntla-Amerika
Umthetho weComputer Equilibrification Definition
I-TaylorMade M2 ​​Iiklabhu zeGolf: I-Driver, i-Fairways, i-Fairways, i-Irons KwiNtsapho
Yintoni ephosakeleyo ngezobugcisa bekhasi?
Nantsi indlela yokulanda iThebula lePeriodic kunye ne-Electron Configurations
Iiform Worksheet zokunceda abantwana bafumane iziqendu ezifanayo
Ziyintoni i-Storm Surge?
Isikhokelo seMbali kunye nesimo seKickboxing
UJohnny Ace: Inkwenkwezi yokuQala yeDwala, iNtlungu yokuqala yoLwaba
I-Koppen Climate yehlabathi